Indawo kaNina , i-lake sandy beach enhle. - I-Airbnb
Indawo kaNina , i-lake sandy beach enhle.
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Barb
Siyakwamukela ku-Nina's Pace: Indlu encane ethandekayo, esanda kulungiswa, elisogwini lolwandle olunesihlabathi esihle esingaminyene. Ilungele ukuhamba nge-kayaking / canoeing kanye nezikebhe ezincane. Sinama-kayak amane nama-paddles atholakalayo ukuze asetshenziswe. (Kumele unikeze amajakhethi akho okuphila). Amaminithi angu-45 ukusuka edolobheni laseFredericton, amabala wegalofu kanye ne-St.Andrews by -the -the -sea resort resort. Umnikazi uhlala ezindaweni ezimbili kude.
Kukhona amadekhi amabili amakhulu, igrill, amatafula epikiniki, izihlalo zedekhi njll.
Imililo evuthayo ogwini ivunyelwe (inqobo nje uma ukuvinjelwa komlilo ungekho)
Ikotishi selilungiswe ngokuphelele. Ikhishi elikhulu elisha, lifaka izinto ezintsha ezi-4, umshini wekhofi we-keurig, nephampu yokushisa yokufudumeza nokupholisa. Kukhona isikebhe esiboshiwe phambi kwekotishi.
Lena indawo yomndeni. Amahora okuthula ngemva kuka-11pm.
ama-condiments ayisisekelo , izinto eziyisisekelo ze-pantry, kanye nemifino nezinongo zinikeziwe. Kukhona umshini wokugaya ikhofi omncane kanye nomshini wokunyathelisa wase-french futhi, ngihlinzeka ngezinhlobonhlobo zama-keurig pod.
i-cove encane ethule enezakhamuzi ezithile unyaka wonke kanye namakotishi asehlobo. Ichibi lingamakhilomitha angu-9 ubude futhi ezindaweni ezifika kumamayela angu-2 ububanzi. Akulona ichibi elijulile futhi linezintaba eziningi . Ilungele izikebhe ezincane, ama-kayak nezikebhe. akuyona into engavamile ukubona izilwane zasendle zomdabu emasimini noma ziwela imigwaqo.
Umnikazi uhlala ngakumakhelwane futhi uzotholakala ukuze aphendule noma imiphi imibuzo noma uma udinga noma yiluphi usizo.